Inona no atao hoe mpanadio rano ary inona no ilana azy? Tombony sy fatiantoka | Fanavaozana maintso
Ny fisotroana rano avy amin'ny paompy dia tsy ny safidy tsara indrindra foana. Tsy noho ny rano tsy azo sotroina, lavitra azy, fa satria ny rano dia mety manana sira be loatra toy ny sokay. Ny voantsika dia mety hisy fiatraikany mandritra ny taona maro miaraka amin'ity sokay be loatra ity, ary noho izany dia entinay anio izay rehetra tokony ho fantatrao ny mpanadio rano. Holazainay aminao ny tombony sy ny fatiantoka rehetra ananan'ireto fitaovana ireto sy ny fomba fiasan'izy ireo.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanadiovan-drano ve ianao? Mamaky hatrany.
1 Inona izany ary inona no ilana azy
3 Tombony lehibe
4 Fikojakojana sy fametrahana ny mpanadio rano
Inona izany ary inona no ilana azy
Tsy ny sira be loatra ihany no afaka miditra ao anaty rano, fa koa ny mikraoba sy bakteria sasany izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana sasany. Ireo maloto ireo dia azo diovina amin'ny fanadiovan-drano. Izy io dia fitaovana iray izay tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny rano izay mivoaka avy amin'ny paompy ka afaka amin'ny loto izany rehefa mandeha misotro azy isika.
Na dia azo sotroina aza ny rano dia azontsika atao ny mijery ny fisian'ny akora manimba sasany ao. Amin'izany rehetra izany dia misy ny mpanadio rano. Izay rehetra hitantsika ankehitriny dia manana teknolojia mandroso izay mifototra amin'ny fampiasana sivana karbaona mihetsika mekanika sy fonosana fisarahana sasany. Misy ihany koa ireo mandroso kokoa izay mampiasa microfiltration hanatanterahana osmosis mihodina. Ireo tovolahy ireo no be pitsiny indrindra.
Ny rano fisotro dia mety halefaka amin'ireto rafitra fanamasinana ireto. Amin'ny ankapobeny dia tokony hesorina izy ireo mandritra ny fiasan'ny rafitry ny rano amin'ireo orinasan-tsolika, fa 100% afaka amin'ny mpiasa mikraoba, simika ary ara-batana marina tsy azo antoka foana.
Ireo mpanadio ireo dia apetraka mivantana eo amin'ny paompy na ao anaty kaontenera ao an-dakozia. Ireo mpanadio ireo dia misy sivana isan-karazany afaka manadio ny ranon'ny zavamiaina bitika sy bakteria hanala ny loto rehetra na ny zavatra tsy ilaina. Tena ilaina tokoa ny mametraka amin'ny toerana somary ambany kokoa ny kalitaon'ny rano. Amin'izany no ahazoantsika antoka fa misotro rano madio isika.
Misy karazany samy hafa arakaraka ny fahasarotany. Ny tena feno dia ireo izay mila fametrahana manerana ny trano ary ny sivana tsotra indrindra manaraka ny paompy. Ireo karazana roa ireo dia samy manana ny tanjony avokoa, fa amin'ny ambaratonga fahombiazany samihafa.
Anisan'ireo tombony hitantsika rehefa mahazo mpanadio isika:
Misotroa rano madio. Zava-dehibe indrindra izany any amin'ireo tanàna izay tsy dia tsara ny kalitaon'ny rano. Mba hahazoana antoka fa misotro rano madio foana isika dia tsy maintsy manamarina ireo sivana tsindraindray ary manova azy ireo matetika. Raha tsy vita ara-potoana izany dia hipetraka ireo zanatany mikraoba.
Mampihena ny loza ateraky ny aretina. Amin'ny tsy fisotro rano misy bakteria sy zavamiaina bitika hafa dia mampihena ny mety ho marary amin'ny rano fisotro amin'ny toe-javatra ratsy isika.
Ny vehivavy bevohoka sy ny zaza dia misotro mahasalama kokoa. Eo amin'ny sehatry ny fitondrana vohoka ary rehefa kely isika dia zava-dehibe ny fikolokoloana tsara izay hohanintsika. Ny vatantsika dia tsy dia mahomby amin'ny famongorana bakteria manimba amin'ny vatana, noho izany dia mila manome izany fanampiana kely izany ianao.
Mora ny mametraka azy ireo. Raha tsy mila ny mpanadio rano amin'ny ambaratonga lehibe manerana ny trano isika, dia mora kokoa ny mametraka ny sivana mahazatra. Tsy mila fikojakojana be koa izy ireo, afa-tsy ny fanovana sivana matetika.
Mitsitsy vola sy ezaka ianao. Amin'ny vanim-potoana antonony sy maharitra dia milamina sy ara-toekarena kokoa izy satria mora kokoa noho ny mifarana amin'ny fividianana rano anaty tavoahangy. Tsy maintsy mampiasa vola voalohany ianao, fa amin'ny fotoana maharitra dia hitahiry vola ianao, satria lafo kokoa ny rano amin'ny tavoahangy.
Manatsara ny tsiron'ny rano. Ho an'ireo rano izay ratsy tsiro, ity sivana ity dia manaisotra ireo tsiro ireo.
Fanampiana amin'ny tontolo iainana. Raha mampiasa ireo sivana ireo ianao ary hisoroka ny rano anaty tavoahangy, hampihena ny emissions plastika amin'ny tontolo iainana izahay (jereo Fanodinana tavoahangy plastika).
Azonao atao ny misafidy ilay mpanadio izay mety aminao indrindra. Misy karazany samy hafa ary mifanaraka tsara kokoa na ratsy kokoa amin'ny fangatahana ny tsirairay.
Na dia safidy manadio rano amin'ny toe-javatra tsara aza ity mpanadio rano ity ary ny tombony dia mihoatra ny fatiantoka, dia hantsoinay izy ireo mba hangarahara amin'ny zavatra rehetra ananantsika.
Tsy maintsy tazonina amin'ny toerana tsara izy ireo. Ireo sivana ireo dia mitazona bakteria sy zavamiaina bitika ao aminy mba hisorohana azy tsy hamakivaky ny rano. Izany no antony mahatonga azy ireo mila ovaina indraindray mba tsy hisitrantsika rano maloto indray. Raha tsy vita tsara ny fikojakojana dia hiteraka fisotroana otrikaina mahavelona tonga lafatra ho an'ny bakteria hiparitaka amin'ny rano isika. Raha tsy manadio azy ianao dia afaka manangona karazana bakteria hatramin'ny 2.000 mahery noho ny amin'ny rano tsy voasivana.
Karama voalohany. Ny mpanadio rano dia mitaky fampiasam-bola voalohany hapetraka. Na dia voavaha mora aza izany tsy fahampiana izany rehefa hitantsika fa ny salan'isan'ny ankohonana amin'ny rano tavoahangy dia 500 euro isan-taona.
Misy rafitra fanadiovana sasany izay manahirana loatra izy ireo ary betsaka kokoa ny mila manova sivana imbetsaka isan-taona. Ny tsara indrindra dia ny mametraka iray izay mila ovaina indray mandeha isan-taona fotsiny.
Fikojakojana sy fametrahana ny mpanadio rano
Araka ny hitantsika, ny fampiasana tsara ireo sivana ireo dia ilaina toy ny rano fisotro amin'ny toe-javatra tsara. Noho izany, holazainay aminao ny tena filàna fikolokoloana ataon'ireo mpanadio ireo.
Ny fikojakojana lehibe manjary manova ny cartridge raha ilaina izany. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manaraka ny torolalan'ny mpanamboatra isika, na dia azo atao aza fa miankina amin'ny fampiasana omentsika azy dia tsy maintsy ovaovintsika matetika kokoa izy io. Ity fikojakojana ity dia kely indrindra raha oharina amin'ny tombony rehetra atolotray antsika ity fitaovana ity.
Mba hametrahana azy ireo dia mila manapaka ny rano mikoriana fotsiny isika ary manokatra ny paompy hahafahanay mandeha ny rano sisa. Avy eo dia hampifandraisintsika amin'ny adaptatera ao amin'ny paompy sy ao anaty fitoeram-panadiovana. Ny kaontenera dia azo ampiarahina sy apetraka amin'ny fomba samihafa. Ireo rafitra ireo dia plug ary milalao, noho izany dia tsy mila ny fanampian'ny plumber isika.
Manantena aho fa miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia afaka mampiasa ilay mpanadio rano ao an-trano ianao ary mahazo tombony amin'ny tombony rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Fanadiovan-drano
Aaron Musk dia hoy izy:
Salama, manana sivana rano 5-dingana aho. Tsy olana lehibe ny fikojakojana, mila ovaina indray mandeha isan-taona sy ny membrane ny sivana isaky ny 2 taona. Ny sivana 4 dia manodidina ny € 14 ka hatramin'ny 16 €. Ny mpanadio dia mitentina 145 € € aho, na eo aza ny € 90, ny mahasamihafa azy dia ny kalitaon'ny fitaovana sy ny fanamafisana ao amin'ny hoses, fa ny rano kosa mivoaka ihany koa. Ankoatr'izay dia tsara ny mividy mpanadihady rano hahitana ny PPM (mitentina eo amin'ny € 19), ny vidiny dia tokony ho 10ppm eo ho eo.
Raha vantany vao marina ny tahiry. Ny fianakaviana antonony dia afaka mandany siny 8L isaky ny 1 na 2 andro. Midika izany € 1,45 (8L Fonteide) * 365 andro = € 529 / taona + ny loto amin'ny plastika isaky ny manary tavoahangy isika .. ..
Nividy azy io indrindra aho mba tsy handoto bebe kokoa, fa marina ihany koa fa manome kalitaon'ny fiainana.
Valiny tamin'i Aaron Musk
Portillo Alemanina dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nitantara taminay ny zavatra niainanao Aarón, azo antoka fa manampy olona maro hanome azy ireo ny fanentanana ilain'izy ireo hanombohana amin'ny tontolon'ny fanadiovana rano.
Valiny tamin'i Germán Portillo
Salama, fanontaniana iray. Oviana no navoaka ity lahatsoratra ity?
Amboary ny tavoahangy plastika